नेपाल आज | लकडाउन विद्यार्थीहरुका लागि ठुलो मौका हो - कुमार थापा (भिडियोसहित)
लकडाउन विद्यार्थीहरुका लागि ठुलो मौका हो - कुमार थापा (भिडियोसहित)
आइतबार, २५ जेठ २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडाैं । यतिबेला कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउन अवस्थामा छ । यस्तो बेला बिशेष गरेर विद्यार्थीहरुले घरमै कोठाभित्र जीवन बिताउनु परेको छ । यो अवस्थामा धेरैलाई के गर्ने कसो गर्ने भनेर अलमन परेको पनि हुनसक्छ । तर शिक्षा व्यवस्थापक समेत रहेका बृहस्पति विद्याचसदनका प्रिन्सिपल कुमार थापा भने यो लकडाउनको समय विद्यार्थीहरुका लागि धेरै कुरा सिक्ने र व्यवहारमा लागु गर्ने ठुलो मौका भएको बताउछन ।
नेपाल आजसँगको कुराकानीमा थापा भन्छन्- 'अलिकति सम्भावनाको खोजि गर्ने हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले सायद हामीले ठुलो मौका पाएका छौं। बिशेष गरि विद्यालय, कलेज जाने भाइबहिनीहरुका लागि यो ठुलो मौका पनि हो, किनभने कमसेकम सबैका लागि नहुनसक्छ तर प्राय धेरै विद्यार्थीहरुले आर्थिकरुपमा आफ्ना अभिभावकहरुसँग डिपेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ ।'
यतिबेला विद्यार्थीहरुलाई होमवर्कको पनि खासै चिन्ता नहुने भएकोले फुर्सदको समयमा आफ्नो क्षमता पहिचान गर्ने राम्रो मौका समेत भएको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन -'यतिबेला म एउटा पोइन्टमा मात्रै सल्लाह दिन चाहन्छु, त्यो भनेको मसँग केछ, केमा इन्ट्रेस्ट छ ? म्युजिक, आर्ट, ग्राफिक डिजाइनिङ, पब्लिक स्पिकिङ जुनसुकै पनि आफुलाई चाहना भएको बिषयमा बढीभन्दा बढी अध्ययन, प्राक्टिस गरेर आफ्नो क्षमता अभिबृद्धि गर्न सक्छाैं ।'
कुनै पनि क्षेत्रमा सफल व्यक्तिको सफलता मात्रै हेर्नुभन्दा पनि त्यो व्यक्तिले आफु सफल हुनका लागि गरेको दुख र मिहेनतबारे पनि बुझ्न जरुरि रहेको उनको बुझाई छ । लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै दैनिक आफुलाई रुचि लागेको बिषयमा अभ्यास गर्दै जाने हो भने दक्षता हासिल गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
अभिभावकहरुले पनि आफ्नो बच्चाले के गर्न चाहेको छ ? त्यहिअनुसार उसको रुचि बुझेर अगाडी बढ्न दिएमा उनीहरुलाई हौसला मिल्ने पनि उनले बताए । हेर्नुहोस भिडियो
जिपले मोटरसाईकललाई ठक्कर दिदा २ जनाको मृत्यु
गार्हो पर्दा काम नलाग्ने साथि एनआइसी एसिया